Hollywood Psychics Review | Online psychic readings
Akhrinta maskaxda internetka > Dib u eegista Cilmi-nafsiga ee Hollywood
Hollywood Psychics Summary
Bixin hordhac ah: Saddexda daqiiqo ee ugu horreysa bilaash iyo $ 1 daqiiqad kasta ilaa daqiiqado 30
Dumarka leh "siyaasadda ugu fudud ee soo celinta weligeed", oo bixiya doorasho ah lacag celin ama deyn haddii aanad ku qanacsaneyn
Barnaamijka nooca "Flyer Flyer": Macaamiisha joogtada ah waxay kasbadaan daqiiqo gunno ah
Dhammaan maskaxdu waa in ay si guul leh u muujiyaan laba sawir oo ay la socdaan shaqaalaha ka hor inta aan la kiraysan
Wada hadalka iyo khudbada internetka ee la heli karo
Waxyaalo badan oo mawduucyo kala duwan ah ayaa laga heli karaa farahaaga
La-taliyeyaashu waxay qiimeeyaan takhasuska iyo habka loo bixiyo talo bixin
La hadal adeegga macaamiisha ee ku nool xaafadda 24 / 7
Adeegyada adoo adeegsanaya webcam aan hadda jirin
Ka dib marka la soo bandhigo hirgelinta, dhammaan qiimaha maskaxdu waa $ 5 daqiiqadii, taas oo ah midka ugu qiimaha badan
E-mailka akhrinta maskaxda ma jiraan hadda
Barkadda xulashada maskaxda
Cilmi-nafsiga Hollywoodka ma qaadanayso uun wax akhristaha maskaxda ama akhriska oo raba inuu furo dukaanka, sida goobaha kale. Kuwa doonaya inay ka shaqeeyaan shirkaddan waa inay buuxiyaan arji, ka dibna ka gudub laba tusaalooyin oo ay ka sameeyaan xubin shaqaale. Markaa kadib waxay imaan karaan guddiga si ay u bixiyaan adeegyo nafsi ah iyo akhrinta tarot ee macaamiisha shirkaddan.
Sababtoo ah ma aysan ku jirin ganacsi ilaa inta goobaha kale oo ay isku dayayaan in ay noqdaan kuwo aad u dooranaya cidda ay shaqaaleysiinayaan, ma laga yaabaa inaadan helin balli aad u ballaaran sida goobo kale. Laakiin tayada tirade, xaq?
Doorashada wax lagu kalsoonaan karo oo sax ah
Lataliye kasta oo laga yaabo inuu tijaabo ka hor inta uusan noqon a Hollywood Maskaxda, sidaa daraadeed waxaad ku qasban tahay inaad doorato habka ugu fiican adoo adeegsanaya nidaamyada kala duwan ee shaandhaynta. Ku dheji xulashada adoo akhrinaya aalado sida kaararka tarot ama astroloji. Miyaad raadineysaa dhexdhexaad, xishood, ama xitaa maskaxda caruurta? Dhib ma laha. Fiiri natiijooyinkaaga. La-taliyeyaasha qaar waxay sidoo kale ku takhasusaan mawduucyo gaar ah, sida arimaha xidhiidhka ama xirfadda iyo dhaqaalaha. Qalabka Psychics 'heerarka sare ee imtixaanka waa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan ku aragnay booska suuqa maskaxda.
Waxaad ka iibsan kartaa daqiiqado 30 daqiiqada hadalka kaliya $ 1 daqiiqadii sida sicir-bararkaaga hordhaca ah, kaas oo ah mid ka mid ah deeqda ugu deeqda badan ee wax-akhriska maskaxda. Qaar badan oo kale waxay bixiyaan qiimaha hordhaca ah ee la midka ah, badanaa leh qadarka ugu hooseeya daqiiqadaha aad ka iibsan karto qiimaha dhimista.
Ka dib sicir-dhimista bilowga ah, heerka akhriska waa $ 5 daqiiqadii. Cilmi-nafsiga Hollywoodka sidoo kale waxay bixisaa barnaamijka dhiirigelinta macaamiisha, oo lagu magacaabo Perks Membership. Xog kasta oo 10 ah bil kasta ugu yaraan 10 daqiiqado, waxaad helaysaa shan daqiiqo oo lacag la'aan ah oo bilaash ah, illaa 15 bilaash ah bil kasta.
Waad dooran kartaa akhrinta maskaxda ee telefoonka, ama waxaad la hadli kartaa internetka la taliyaha haddii aad raadinayso wax aad u sarreeya. Cilmi-nafsiga Hollywoodka iminka ma bixinayso sheeko-camal-qabsi, kaas oo u oggolaan lahaa in si toos ah, xiriir shakhsi ah. Waxay sidoo kale ma bixiyaan akhrisyada maskaxda. Si kastaba ha ahaatee, akhrinta emailka waxay noqon kartaa mid aad u xaddidan illaa inta awood u leh inay bixiso jawaab celin ama waydiiso su'aalaha soo socota adigoon iibsanayn cinwaan kale oo email ah.
Mawduucyada maskaxda ayaa leh cajalado maqal ah oo akhristayaasha cilmi nafsiga ah, si aad u aragtid lataliye ka hor intaadan iibsan wadatashi.
Damaanad-qaadyada iyo Lacag-celinta
Inta badan adeegyada kale ee maskaxiyan waxay bixiyaan deymaha xisaabtaada haddii aadan ku qanacsanayn, laakiin Cilmi-nafsiga Hollywoodka wuxuu dhab ahaantii kuu celin doonaa lacagtaada haddii aad jeclaan lahayd. Si aad u hesho lacagta dib u celinta waa inaad la kulantaa dhowr tilmaamood, sida inaad la xiriirto adeegga macaamiisha hal maalin gudaheeda akhriska. Sidoo kale waa inay ahaato akhriskaaga ugu dambeeyay ee ugu dambeeyey, maadaama ayan kuu soo celin karin lacag la'aan.
Haddii aadan ku qanacsaneyn mid ka mid ah akhriskaaga ugu horeeya, tixgeli inaad heshid kareedhitka koontada si aad u tijaabisid nafsi kale. Mararka qaarkood akhristayaasha cilmi-nafsiga iyo tarotiyiinta ayaa ku fashilmaan inay xiriir la yeeshaan markii ugu horeysay. Iyada oo dammaanad qaad ah oo aad u fiican, ma jirto wax khasaare ah oo loo geysanayo dib u bixinta lacagta caddaanka ah ee dambe.
Cilmi-nafsiga Hollywoodka waxay ku siineysaa xulasho dheeraad ah oo maskaxiyan ah qiimaha dhexdhexaadka ah ka dib sicir-bararkaaga bilawga ah, laakiin waxay ku siiyaan adeegyo dheellitiran oo daqiiqado ah si ay u tijaabiyaan adeegga $ 1 daqiiqaddiiba. Haddii aadan ku faraxsaneyn, laguma qasbin waxaad heli kartaa deyn, laakiin waa lagaa soo celin karaa lacagtaada. Ma jiraan wax khatar ah oo ku lug leh.
Cilmi-nafsiga Hollywoodka ma qaadanayso uun wax akhristaha maskaxda ama akhriska oo raba inuu furo dukaanka, sida goobaha kale. Kuwa doonaya inay ka shaqeeyaan shirkaddan waa inay buuxiyaan arji, ka dibna ka gudub laba tusaalooyin oo ay ka sameeyaan xubin shaqaale.